Walaal waxaad naga gudoontaa salaanta islaamka ah ee kor ku xusan. Salaan ka dib, waxaan doonaynaa inaan kula wadaagno in Boston Islamic Center (BIC) ama Masjid Altaqwa oo ah masjid ay umada Islaamka ah gaar ahaan Somalida ay ka faa’iidaysteen 15 kii sano ee la soo dhaafay. Waqtigaas dheerna waxaa lagu jiray meel kira ah oo hadana ciriiri ah.
Sidoo kale waxaa maalinba maalinta ka danbaysa sii kordhayay baahida loo qabo in Masaajid loo iibiyo bulshada Somaliyeed oo ka mid qoomiyada Islaamka ah ee ugu tirada badan magaaladan Boston.
Allaah (عز وجل) ayaa noo ogolaaday noona fududeeyay helida dhul aad u wayn oo ku dhex yaala xaafada Roxbury ee Somalidu u badan tahay. Dhulkaas waxa uu ku yaalaa 2870 Washington Street, Roxbury MA, 02119.
Waxaan Allaah dartiis kuu waydiinaynaa inaad masjidka ku taageeertid bixinta lacagta ku hartay iyo dhismihiisa. Masjidku dhulka waxa uu kala baxay lacag dhan 1.5 milyan. Wuxuu dhiibay $400.000 waxaana ku hartay 1.1 milyan. Lacagtaasna waxa laga doonayaa adiga iyo walaalaha kale ee Muslimiinta ah.
Rasuulka صلى الله عليه وسلم wuxuu yi من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة "Qof kii Allah dartiis masjid u dhissa Allah ayaa guri uga dhissa Jannada” Walaal ka qayb qaado dhimsaha si Allah guri jannada kaaga dhisso”.
Mar walba waxaa diyaar ah walaaha arintaas kamasuul ah:
Iman Yusuf Abdulle BIC Imam
Mohamed Khalif BIC President
Abdulkadir Moalin, BIC Secretary
BIC Cell: 617-708-9555